Teknolojiyada Xayeysiinta Falanqaynta & Tijaabada Content Suuq Maareynta Xiriirka Macaamiisha iyo Is-beddellada Xogta Ganacsiga iyo Tafaariiqda Suuqgeynta Emailka & Suuqgeynta Suuqgeynta Emailka Teknolojiyada soo ifbaxaya Suuq geynta Fiidiyowyada Suuqgeynta & Iibka Buugaagta Suuqgeynta Dhacdooyinka Suuqgeynta Macluumaadka Suuqgeynta Aaladda Suuqgeynta Tababarka Suuq geynta Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinka Xiriirka Dadweynaha Kordhinta Iibka Suuq Goobid Media Social Suuq
Jimco, Febraayo 26, 2021 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Subaxaan waxaan la kulmay macmiil leh goobo kala duwan oo ganacsigooda ah. In kasta oo aragtidooda dabiiciga ahi ay ahayd wax laga naxo boggooda, meelayntooda qaybta Khariidadda Google Map waxay ahayd mid cajiib ah Waa wax aan jirin oo ganacsiyada badani si buuxda u fahmin. Bogagga natiijooyinka mashiinka raadinta raadinta waxay leeyihiin 3 qaybood oo waaweyn: Raadin Lacageed - oo lagu muujiyey qoraal yar oo sheegaya Xayeysiis, xayeysiisyada ayaa sida caadiga ah caan ku ah xagga sare ee bogga. Dhibcooyinkan
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Mid ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ee warshadayda ayaa ah hal-abuurnimada sii socota iyo hoos u dhaca qiimaha leh ee istiraatiijiyadaha is-gaarsiinta suuqgeynta heer sare ah. Meeshii ganacsiyadu markii hore ku bixiyeen boqollaal kun oo doolar (walina ku sameeyaan) barnaamijyada waawayn… hadda kharashyadu si weyn ayey hoos ugu dhaceen halka astaamaha ay sii wadaan inay sii fiicnaadaan. Waxaan dhowaan la shaqeyneynay shirkad fulineysa moodada shirkadda oo diyaar u ahayd inay saxiixdo qandaraas madal ay ku kacayso in ka badan nus milyan milyan
Axad, Febraayo 21, 2021 Talaado, Febraayo 23, 2021 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo In kasta oo qawaaniinta marin u helka goobta ay jireen sannado, shirkadaha ayaa ka gaabiyay inay ka jawaabaan. Ma aaminsani inay tahay arrin naxariis ama naxariis dhinaca shirkadaha… Runtii waxaan aaminsanahay in shirkadaha ay si fudud ugu dhibtoonayaan inay sii wadaan. Tusaale ahaan, Martech Zone ayaa ku liidata helitaankeeda. Waqti badan, waxaan ka shaqeynayay inaan hagaajiyo labadaba summadaha, naqshadeynta, iyo xogta badan ee loo baahan yahay… laakiin si dhib yar ayaan ula socon karaa
Waqtiga Akhrinta: 4 daqiiqo Froala WYSIWYG Tifatiraha Qoraalka Taajir
Jimco, Febraayo 19, 2021 Arbacada, February 24, 2021 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 7 daqiiqo Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ka caawiyay boqollaal urur inay dhisaan istiraatiijiyaddooda mawduucyada iyo hagaajinta aragtida guud ee mashiinka raadinta. Hawshu si toos ah ayey toos ugu socotaa: Waxqabadka - Hubso in boggooda ay si fiican u shaqeeyaan marka loo eego xawaaraha. Aaladda - Hubso in waayo-aragnimadooda goobta ay ka sarreyso miisaska iyo gaar ahaan mobilka. Calaamadeynta - Hubso in boggooda uu yahay mid soo jiidasho leh, oo si fudud loo isticmaali karo, isla markaana si joogto ah loogu calaamadeeyo faa'iidooyinkooda iyo kala duwanaanshahooda. Mawduuc - Hubso inay leeyihiin nuxur